Umzobo weSurreal Paintings zoMzobi waseFrance uCyril Rolando | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubetha imifanekiso eqingqiweyo yedijithali yomculi waseFrance uCyril Rolando
UCyril Rolando Uneminyaka engama-28 ubudala kwaye usebenza njenge ugqirha wezengqondo iminyaka emi-6. Ngoku uhlala emazantsi e EFransi Indlela yam yobugcisa ibekwe phakathi kwesitayile sokwenene kunye nefantasy, njengoko evakalisa igama elinye: Elinye ilizwe. Akazange athathe naziphi na iikhosi zobugcisa, kuba unazo umbono we-anatomy / umbono . Usebenza nge-intuition ukubuyekeza ukungabikho kolwazi kunye nokungena kwimibala.
Ukuqala kwakhe ngo-Novemba 2003, wasebenzisa imouse kunye neFotohop 7. Ngo-2005, wathenga ithebhulethi iWacom Graphire3. Kwaye ukusukela ngo-2007, ndisebenzisa Ifoto ye-Photoshop CS2 kwaye ukusukela ngo-2012, a Ithebhulethi yeWacom Intuos4M . Akazi ukuba uzoba njani ephepheni, kodwa ucinga ukuba uyonqena ukuzama le ndlela. Emva koko sikushiya ividiyo ukuba isebenza njani.
1 Isiqalo :
Waqala ukuzoba kwikhompyuter emva kwexesha ukusukela ngo-2003, ukwenza 'oekakies', ukuzama ukuphucula kule software kunye nokwabelana ngomsebenzi wabo noluntu. Wakhawuleza waqonda ukuba wayenako ukuzoba nge Uhlobo lwe manga.
Emva kweenyanga ezithile , usebenze kwi 'photoreferences' kwaye wazama ukwenza ifayile ye- eyinyani. Usebenze ngegundwane ngenxa yoko wayenqongophele, kodwa wabalekela kumba wombala kwaye wazama ukudlala ngokuchaseneyo.
Emva kwe- ubunyani abuyi kubhena kuwe, wazama ukudlala naye Ukuziqhelanisa, Ukutshintsha imibala, ukudibanisa izinto ezintle o kugqwetha imigaqo ebonakalayo.
Uyazi ukuba imisebenzi yakhe ayikho phakathi kobutyebi obuphezulu bobugcisa. Andifuni ukwenza izinto ezintle, kodwa ukwenza ubunzima ekubambeni inkangeleko yeemvakalelo ngoxande abancinci, iinqabana ezinqabileyo kunye nemibala.
UTim Burton kunye noHayao Miyazaki zombini ziingcambu zehlabathi lam. Ndiyayithanda intshukumo ye-surrealist, ngakumbi umsebenzi kaBoris Vian nowakhe igwebu eliqaqambileyo (I-L'écume des jours-1950). Ndiyabuthanda ubuyatha, ubuchule kunye nomtsalane kwindalo iphela, apho imibala izisa iimvakalelo ezingaphezulu kwewaka lokuncuma okanye iinyembezi ezizigidi. Ndipenda kuphela into endifuna ukuyibona, inyani ehlekisayo, evela kwelinye ilizwe.
Ndiyayithanda imisebenzi yexesha, ukuvela koluntu, ukutshintsha kweengcinga, uguquko lwabantu. Okwam abalinganiswa bahlala belahlekile ngabantwana ekufuneni kwakhe inyaniso (kwaye hayi inyaniso). Amabali abo abuhlungu ngokwaneleyo, kodwa ubumnyama bobomi buyonwabisa ngakumbi yenza abantu bonwabe kwaye bakhuseleke, ngokoluvo lwam.
Umntu kwindalo iphela ligqabi lomthi omkhulu, kodwa eli lihlathi elikhulu. Ke ngoko, andinasikhalazo ngemeko yam, nokuba Ubomi bunambitha ngamanye amaxesha.
Kodwa, ndineemvakalelo, ndiyathetha, ndifuna ukubakhona, ndifuna ukwahluka kwamanye amagqabi. Andifuni ukukhukhula ubunzima bam ngotywala, ukubaleka ngesiyobisi, okanye ukubulala iintlungu engqondweni yam ngokubukela umabonwakude. Ukubakho, ndiyapeyinta, Ndisebenzisa indlela endiziva ngayo, iimvakalelo zam, kwaye ngamanye amaxesha andazi ngenene indlela endivakalelwa ngayo, mhlawumbi akukho lizwi lokuguqula into endiziva ngayo. Ukuququmbela, Andikwazi ukwenza ngaphandle kokusebenzisa iimoods zam.
Ndiyacinga, ke xa ndidikiwe lihlabathi, ndiyonwaba kunye Inguqulelo yenyani yenyani. Inqaba ye-Eiffel njengentyatyambo, ichibi le-champagne…. Ibalisa ibali, ibali lam, indlela yam yokuqonda umhlaba, okanye into endinokuyithetha ngokwahluka kwayo.
Imisebenzi yam yobugcisa iphawula amaxesha ahlukeneyo obomi bam. Ndifuna ukuveza izimvo zam, njengonyango lobugcisa. Ndifuna ukwenza iintlungu, uvuyo kunye nolindelo. Inkqubo ye- imibala yeyona ndlela iphambili yokutolika iimvakalelo zam. Ndingathanda ukongeza iinkcukacha ezininzi, y Ndiqinisekile ukuba ngamanye amaxesha akuyomfuneko kwaye ukwakhiwa kuya kuba nzima, kodwa le yinxalenye ebalulekileyo ye-hieroglyph. Iinkcukacha ezithe kratya, ngakumbi indlela yokufunda umfanekiso, ngakumbi amathuba okulahleka kunye nokuzifumana. Akukho ndlela inye yokufunda umsebenzi wam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukubetha imifanekiso eqingqiweyo yedijithali yomculi waseFrance uCyril Rolando
I-Isso ithintela ingqwalaselo yeendwendwe ezimbini ekwahlulweni okanye ekuhombiseni
phakathi kwempixano ebaluleke ngokwenene: você e
seu ilifu. kuba ndiyazi ukuba u-Ela uzakuhamba e-haurir água kwaye http://genzouzi.no-ip.com/cgi-bin/norbbs/mainbbs.cgi?list=thread
Imizobo yedijithali entle yomculi waseJamani uJohannes Voss
Ubuxoki obu-10 obuhlala buqhatha umyili wemizobo